Salaamanews » 2013 » February » 10
Home » Security Council to Assess Somalia Mission
(Salaamanews)- The U.N. Security Council is preparing to consider a report on Somalia from Secretary-General Ban Ki-moon that includes options and recommendations for a future U.N. role in the country.
U.N. special envoy to Somalia Augustine Philip Mahiga says a Security Council meeting on the recommendations will take place within the coming week.
In a VOA interview, Mahiga said the U.N. intends to... Tags: news Wafdi ka socday burundi oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho ayaa ballan qaaday soo celinta xiriirkii Soomaaliya
(Salaamanews)-Wafdi xildhibaanno ah oo ka socda baarlamaanka dalka Burundi ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo ay soo dhoweeyeen xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Wafdigan waxaa hoggaaminayey Hakizimna Emilien oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Burundi, waxaana ujeedada safarkooda ku sheegeen inay xiriir iyo iskaashi la sameystaan baarlamaanka Soomaaliya.
Kulan... Tags: warar Mahiga “Cunaqaba teynta hubka ee Soomaaliya waa sii dhamaaneysaa”
(Salaamanews)-Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa todobaadka soo socda kulan gaar ah ka leh Arrimaha Soomaaliya, kaasoo looga hadlayo marxaladihii u dambeeyay ee dalka iyo codsigii Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ee ahaa in dib u eegis lagu sameeyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha guud Qaramada Midoobey Augustine Mahiga ayaa sheegay in... Tags: warar Rajada maamul u sameynta Jubooyinka oo sal dhigatay Kismaayo
(Salaamanews)-In ka badan 100 ergo ka kala socda deegaanada saddexda gobol ee qorshuhu yahay in maamulka loo sameeyay ayaa shalay gaaray Kismaayo, iyadoo magaalada laga dareemayo qaban qaabo xoogan oo ku aadan shirweynaha maamul u sameynta.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb geli doona Xubno ka socda Urur Goboleedka IGAD, kuwaasoo ku howlanaa maamul u sameynta Jubooyinka tan iyo markii la qabtay magaalada... Tags: warar Baraf iyo Dabeylo xoogan oo saameeyay nolasha dadka Mareykanka
(Salaamanews)-Baraf iyo dabelyo xoogan ayaa saameeyay waqooyi bari dalka Mareykanka, iyadoo Gobolo badan uu soo wajahay koronto la’aan iyo xaalado kala duwan.
Dabeylahan iyo barafka is wata ayaa gil giolay Gobol dhaca xeebaha bari ee dalka Mareykanka, waxaana laga soo saaray xaalad deg deg ah.
Saldhiga korontada ee nuckliyeerka ee Massachusetts, waxaana malaayiin ruux ay guryahooda ku hakadeen,... Tags: warar al-Shabaab oo gowraceysa ganacsato la gubay raashin u rarnaa
(Salaamanews)-Kooxda al-Shabaab ayaa dab qabadsiiyay raashiin u rarnaa ganacsato Soomaali ah oo ku sii jeeday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Dad deegaanka ku sugan ayaa SN u sheegay in sidoo kale ay xabsiga dhigeen ganacsatada uu gaariga u rarnaa oo nin iyo laba haween ahaa.
Gaariga oo ahaa nooca xamuulka ayaa waxaa uu siday misir, waxayna kooxdu u haysatay in gaariga uu u rarnaa hay’adaha... Tags: warar Gallan “al-Shabaab ayaa qatar ku soo ah gobolka Bari”
(Salaamanews)-Kulan ballaaran oo looga arrinsanayay ammaanka gobolka Bari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaas, iyadoo kulanka ay ka qaybgaleen mas’uuliyiinta maamulka gobolka, culumaa’udiinka iyo isimada.
Kulanka oo ahaa mid muddo saacado qaatay ayaa lagu gorfeeyey sida loo xoojin karo nabadgelyada gobolka, waxaana lagu soo qaadday sidii dhinac looga soo jeesan lahaa... Tags: warar Tiradii ugu badneyd oo Soomaali ah ayaa bishii hore ka laabtay Kenya
(Salaamanews)-Qaramada Midoobey ayaa shaaca ka qaadday in qaxooti tiradooda ay gaarayso 6,300 oo Soomaali ah oo ku noolaa waddanka Kenya ay dib ugu laabteen Soomaaliya kaliya bishii la soo dhaafay ee January.
Warbixin uu daabacay xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan howlaha bini’aadannimoada ee OCHA ayaa lagu sheegay in kororka qaxootiga noqonaya ay sababtay ammaan-darrada ka jirta xeryaha... Tags: warar Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »